बालेनको गोप्य रहस्य पर्दाफास, ८० बिघा जग्गा, अरबौँ सम्पत्ति, सारा नालीबेली ! - Mitho Khabar
बालेनको गोप्य रहस्य पर्दाफास, ८० बिघा जग्गा, अरबौँ सम्पत्ति, सारा नालीबेली !
May 30, 2022 mithokhabarLeaveaComment on बालेनको गोप्य रहस्य पर्दाफास, ८० बिघा जग्गा, अरबौँ सम्पत्ति, सारा नालीबेली !
काठमाडौ । महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिकाका स्थानीय बालेन साहलाई स्वागत गर्न आतुर छन् । तत्कालीन एकडारा गाउँकै जमिनदार (महाजन) परिवारका कान्छो छोरा बालेन्द्र काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बन्ने पक्का भएपछि महोत्तरीस्थित उनको पैतृक गाउँमा स्थानीयहरू खुसीले प्रफुल्ल छन् ।
बालेनलाई सघाउन र हौसला प्रदान गर्न उनलाई चिनेका बाल्यकालका साथीहरू मतगणना सुरु भएपश्चात् नै काठमाडौं पुगिसकेका छन् । पिता डा. रामनारायण साहका कान्छो छोरा बालेन्द्र बाल्यकालमा गाउँ आउने गरे पनि जनकपुर र काठमाडौंमा समेत घर भएकै कारण पैतृक गाउँ आउने क्रम पातलिँदै गएको थियो ।
बालेनको जन्म काठमाडौंमै भएको हो । डा. साहकी कान्छी श्रीमती ध्रुवदेवी साहको कोखबाट बालेन्द्र साह जन्मिएका हुन् । जागिरको क्रममा आमाबुबा काठमाडौंमा हुँदा उनको जन्म भएको थियो ।बालेन जन्मिएको करिब ६ महिनामै उनको परिवारले गाउँ छोडेको थियो । उनका पिताले एकडाराको २ नम्बर वडा कार्यालयलाई एक कट्ठा जमिन दान गरेर काठमाडौं फर्किएका थिए ।
हाल बालेनको पैतृक घर एकडारा गाउँपालिकाको कार्यालयलाई भाडामा दिइएको छ । सोही घरको दुईवटा कोठा पारिवारिक बसाइको लागि छुट्याएर राखिएको छ । बालेन वा उनका परिवारका सदस्य यहाँ आएको समयमा सोही कोठामा बस्ने गर्छन् ।
बालेन साहको गाउँको घर
बालेनका पिताका मित्रसमेत रहेका स्थानीय नरेश तिवारीले काठमाडौंमै सबैको जागिर भएकाले गाउँ आउजाउ निकै कम हुने गरे पनि बालेनका पिता डा. साह भने समय–समयमा गाउँ आउने गरेको बताए । बालेन केही समय पहिले बाबुसँग गाउँ आएका थिए । उनका पिताले गाउँमा रहेको केही जग्गा बेच्ने सोच बनाए थिए । तर, बालेनले नै गाउँमा रहेको सम्पत्ति बेच्नबाट बुबालाई रोकेको तिवारीले बताए । बालेनका पिताको सम्पत्ति करिब ७० देखि ८० बिघा रहेको तिवारीले जानकारी दिए ।
यता गाउँमै बालेनको पुर्ख्यौली महादेव मन्दिर पनि छ । मन्दिरका पुजारी रहेका रामचन्द्र तिवारीले मन्दिरको पूजापाठ नियमित होस् भनेर बालेनका पिताले १० कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको बताए । सोही जग्गाबाट हुने आम्दानीले मन्दिरको पूजापाठ नियमित हुँदै आएको तिवारीले जानकारी दिए ।
यस्तो छ बालेनको परिवार
स्थानीयहरू बालेनको वंशबारे भन्छन्- मेथुर साह र धरकन साह दुई भाइ गाउँका जमिनदार रहेका थिए । दुवैलाई गाउँमा महाजन भनेर सम्बोधन गरिन्थ्यो । जेठो मेथुर साहलाई चार छोरा जन्मिए । डा. रामनारायण साह, इन्जिनियर सत्यनारायण साह, जितनारायण साह र इन्जिनियर लालबाबु साह ।
सोहीमध्ये जेठो डा. रामनारायण साहका दुई छोराहरू क्रमशः कौशलेन्द्र साह र बालेन्द्र साह (बालेन साह) हुन् । बालेन्द्र कान्छाे छाेरा हुन् । उनी विभिन्न बिदा, चाडपर्व मनाउन गाउँ आउने गर्छन् । आजभोलि उनी काठमाडौंमै बढी व्यस्त हुने भएकाले गाउँ आउने क्रम केही पातलो भएको आफन्तले जानकारी दिए ।
काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर वालेन्द्र साहले स्थानीय तहमा आफ्नो जितलाई विजय नभएर कामको सुरुवातको रुपमा लिएको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा निर्वाचन आयोगले महानगरको निर्वाचन परिणाम घोषणा कार्यक्रममा मेयर साहले उक्त कुरा बताएका हुन्
‘आजबाट यसलाई विजयभन्दा पनि कार्यको सुरुवातको रुपमा लिएका छौं । हामी अबका दिनमा भिजन, एजेन्डालाई कार्यान्वयन र सम्पन्न गर्नेतिर लाग्नेछौं,’साहले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाकाका मतदातालाई उनले परिवारका रुपमा लिएको र काठमाडौंलाई सुन्दर सहर बनाउन सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । ‘हामी महानगरवासी सबै एकै परिवार हौैं । हामी सबै मिलेर काठमाडौंलाई देशकै मात्र नभएर विश्वकै सुन्दर, उत्कृष्ट सहर बनाउनलाई मिलेर सहकार्य गर्ने आशा राखेको छु,’साहले भने ।
स्वतन्त्रबाट उठेका साहले कांग्रेसकी सिर्जना सिंह र एमालेका केशव स्थापितलाई हराउँदै मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । साहले ६१ हजार ७६७ मत ल्याएका हुन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसकी सिंहले ३८ हजार ३४१ मत ल्याइन् । स्थापितले ३८ हजार ११७ मत ल्याए । साहले सिंहको भन्दा २३ हजार ४२६ मत बढी पाएका छन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****